सरकारको तयारी, प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी आज – Rajdhani Daily
सरकारको तयारी, प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी आज
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेलगत्तै सरकारले सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख सिफारिस गरी प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने भएको छ । दलहरूबीच प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानीका विषयमा सहमतिका लागि भएको प्रयास विफल भएपछि सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानीबारे निर्णय लिन लागेको हो ।
शुक्रबार (आज) बिहान बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखको सिफारिस र अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
पूर्वउपकुलपति मध्येबाट डा. केदारभक्त माथेमा र सुरेशराज शर्मा प्रदेश प्रमुखको चर्चामा छन् । यस्तै, निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त मध्येबाट दोलखबहादुर गुरुङ र डा. भोजराज पोखरेलमध्ये एकको सम्भावना छ ।
विवादरहित ढंगले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारीमा रहेको सरकारले उच्च अदालत रहेका सातै प्रदेशका स्थानलाई नै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरिरहेको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले बुधबार सात प्रदेशका उच्च अदालत रहेकै स्थानमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदानसमेत सोही स्थानमा गर्ने तयारी गरेको छ ।